कलेज पढ्ने युवतीलाई सह–चालकले आन्टी भन्दा हाँस्ने युवकले भेटे राम धु!!लाई – ईमेची डटकम
कलेज पढ्ने युवतीलाई सह–चालकले आन्टी भन्दा हाँस्ने युवकले भेटे राम धु!!लाई
काठमाडौं । सामान्यतया हामी सबैले सार्वजनिक बसमा यात्रा गरेका छौ । बेलाबेलामा यात्रु र सह–चालकका बीचमा झगडा भएका दृश्यहरु पनि हामीले देखेका छौं । झगडाका अनेक कारण हुन सक्छन् ।
भाडाका कारण भने धेरै नै विवाद सृजना हुने गर्छ । तर तपाईले कहिल्लै सोच्नु भएको छ । कुनै युवतीलाई आन्टी भनेकै कारण झगडा भएको सुन्नु भएको छ कि छैन ? यस्तै एक घटना भारतमा भएको छ । जहाँ एक युवतीलाई सह–चालकले आन्टी भन्दा झगडा भएको छ । भारत मध्य प्रदेशको भोपालको रोशनपुरामा हिजो राति ९ (स्थानीय समय) बजे भिड जम्मा भएको थियो । यहाँ दुई जना युवती मिलेर एक युवकको पि!!टाई गरिरहेका थिए ।
घटनाको जानकारी पाउँने वितिकै ट्राफिक प्रहरी आएर उनीहरुलाई नि!यन्त्र!!णमा लिएर गयो । मानिसहरु यो अनुमान गरिरहेका थिए कि ति युवकले युवतीहरुमाथि दु!!व्र्य!!वहार गरेका हुन सक्छन् । उनीहरुलाई चौकीमा लिएपछि प्रहरीले दुवै पक्षको बयान लियो अनी उनीहरु घर फर्कायो । चौकी इन्चार्ज वीरेन्द्र चौहानका अनुसार उनीहरु एउटै बसमा यात्रा गरिरहेका थिए ।
जब बस रोशनपुरा चौराह पुग्यो तब सह–चालकले आन्टी भाडा दिनुहोस् भन्दै दुई जना युवतीसँग पैसा मागेका थिए । उनले यस्तो भनेपछि बसमा भएका अन्य व्यक्तिहरु हाँस्न थालेपछि उनीहरुले सहन सकेनन् ।
हाँस्नेमध्यका एक जनालाई ति युवतीहरुले जबरजस्ती आफुसँगै बाहिर लिएर गएको बताइएको छ । उनीहरुले रातमा ति युवकलाई मिलेर कु!!!टेका हुन् । अहिले यो विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ । विशेष कारणवश उनीहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । तर उनीहरु एउटै कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । एजेन्सी
विराटनगर / सोमबार बिहान ६ बजेको थियो । विराटनगर बसपार्कमा एक महिला छटपटाइरहेकी थिइन् । प्रसव पी!!डाले छटपटाइरहेकी उनी थिइन् सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–७ गैसारकी ३५ वर्षीय सालु सरदार । उनी गर्भवती थिइन् ।
बच्चा जन्मिएका बेला आवश्यक पर्ने कपडा किन्न भारतको जोगवनी बजार जाने क्रममा विराटनगर बसपार्क आइपुगेपछि उनलाई प्रसव पी!!डाले च्यापेको हो । त्यही क्रममा उनले छोरा जन्माइन् । महिलाले खाली भूइँमै शिशु जन्माएको कुरा सुनेपछि स्थानीय बासिन्दा भेला जम्मा हुन थाले । केहीले तन्ना दिएर सहयोग गरे । केहीले चाउचाउको रस बनाएर खुवाए ।
सडकमै बच्चा जन्माउने सालुका पहिलो सन्तान १२ वर्षका छोरा छन् । दुई महिना अघि श्रीमान ४० वर्षीय राजकुमारको अचानक मृ!!!त्यु भएपछि घरमा छोरा र ग! र्भवती अवस्थाकी उनी मात्रै थिए । पारिवारिक आर्थिक अवस्था एकदमनै कमजोर रहेको र श्रीमानको पनि मृ!!!त्यु भएपछि थप समस्यामा परेको सालुले बताइन् ।
उनले ग!र्भवती भएपछि अहिलेसम्म चेकजाँचका लागि कुनै पनि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था नगएको बताइन् । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीले खुला ठाउँमा महिला सु!!त्केरी भएको सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीयसँग समन्वय गर्दै सु!!त्केरी अवस्थाकी महिला र नवजात शिशुलाई उद्धारमा प्रहरीले पनि सहयोग गरेको बताए ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर बुढाथोकीले सुत्केरी आमा र नवजात शिशु दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताए । उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई उद्रित गर्दै उहाँले शिशुको तौल २ दशमलव ७ किलोग्राम रहेको जानकारी दिए । बुढाथोकीले सामान्य तरिकाले बच्चा जन्मिएको भए पनि २४ घण्टासम्म चिकित्सककै निगरानी आमा र बच्चालाई राखिने बताए । उनले अझै पनि धेरै जसो महिलामा ग!!र्भवती भएका बेला नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल जानु पर्छ र स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने ज्ञानको भने अभाव रहेको बताए ।
३९ श्रीमती, ९४ सन्तान, १४ बुहारी र ३३ नातिनातिना, हाँसीखुसी परिवार (फोटो फिचर)
आपत्तिजनक अवस्थामा भेटिएका जोडीलाई कपाल मुण्डन गर्दै पिसाव पिलाइयो